Bruno Fernandes oo tilmaamay sababta uu ugu dhiirraday inuu ku biiro kooxda Man United – Gool FM
(Manchester) 17 Mar 2020. Xiddiga khadka dhexe reer Portugal iyo kooxda Manchester United ee Bruno Fernandes ayaa cadeeyay in wadankiisa uu ka mid yahay wadamada ugu qanisan qaaradda Yurub ee xagga kartida.
Ku guuleysiga Bruno Fernandes ee abaal-marinta xiddiga bisha ee horyaalka Premier League-ga ayaa waxay timid kaddib dadaalkii uu sameeyay mudadii gaabneyd uu joogay kooxda Manchester United.
Bruno Fernandes ayaa wuxuuna si dhakhso ah ugu guuleystay inuu caddeeyo inuu u qalmo xirashada maaliyada gaduudan ee Manchester United, wuxuuna sagaal kulan uu ciyaaray ku guuleystay inuu dhaliyo 3 gool, wuxuuna sidoo kale caawiyay 4 gool kale.
Xiddiga reer Portugal ayaa ku guuleystay inuu hantiyo quluubta taageerayaasha kooxda Manchester United inkastoo uu joogo muddo gaaban oo kaliya, haddana wuxuu ku guuleystey inuu sameeyo baasas qurxoon iyo inuu dhaliyo goolal, taasoo sababtay inuu hantiyo quluubta jamaahiirta Red Devils, waxayna u tixgaliyeen inay la meel dhigaan xiddiga ay isku wadanka yihiin ee Cristiano Ronaldo kaasoo ay inta badan magaciisa ku heesi jireen.
Haddaba wargeyska “Mirror” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Bruno Fernandes, kaasoo uu ku xaqiijiyay inuu ku dhiirraday Ronaldo si uu u dhameystiro talaabadii uu ugu biiray kooxda Man United wuxuuna yiri:
“Ronaldo wuxuu mid dhiirragalin leh, markii aan bilaabay daawashada Ronaldo iyo kooxdiisa oo aan arkay kooxda oo awood u leh inay ku guuleysato wax walba, marka riyadaada waa inaad halkan joogtaa”.
“Waxaan jeclaan lahaa inaan noqdo ciyaaryahanka ugu fiican sida ugu macquulsan, oo la ii xasuusto sida mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican kooxda Manchester United”.